ကောငျလေးတှေ တကယျခဈြမိပွီဆိုရငျ ပွုမူတတျတဲ့အခကျြ ၉ ခကျြ
Homeloveကောငျလေးတှေ တကယျခဈြမိပွီဆိုရငျ ပွုမူတတျတဲ့အခကျြ ၉ ခကျြ
သငျ့အပျေါ တကယျခဈြတဲ့ခဈြသူနဲ့ ဆုံတှရေ့တာ နတေို့ငျးကံကောငျးနတောပါနျော။ အတိတျမှာ သငျကတကယျခဈြခဲ့ပမေယျ့ သငျ့ကိုတကယျမခဈြတဲ့သူနဲ့လညျး ဆုံခဲ့ရမှာပါပဲ။ အဲဒီအခြိနျမှာ ကွီးကွီးမားမားစိတျထိခိုကျတာတှေ၊ အသညျးကှဲတာတှကေို ခံစားရမှာပါ။ အသညျးကှဲပွီဆိုရငျ ယုံကွညျမှုတှလေညျး ပြောကျဆုံးသှားမယျ။
မြှျောလငျ့ခကျြတှလေညျး ဆုံးရှုံးသှားမယျ။ အမှနျတရားတှကေိုလညျးညလကျမခံနိုငျ ဖွဈလာပါလိမျ့မယျ။ နောကျထပျ မခဈြမိတော့အောငျ သငျ့ကိုယျသငျ ကတိပေးနတေော့မှာပါ။ အခဈြစဈကိုမတှမေ့ခငျြး ဘယျသူ့ကိုမှမခဈြမိအောငျ နမေယျလို့ သငျပွောခဲ့မှာပါပဲ။ ဒါပမေယျ့ အလုပျထကျ အပွောက ပိုလှယျပါတယျနျော။
Relationship တဈခုမှာ ကောငျလေးတှကေ စကားမြားတာ၊ လပေေါတာကို မကွိုကျပါဘူး။ အဲဒီအခါ သငျ့ခဈြသူက တကယျခဈြလား၊ မခဈြဘူးလားဆိုတာကို လလေ့ာဖို့ လိုလာပါပွီ။ ပထမဆုံးအခကျြနနေဲ့ ကောငျလေးတှကေ အပွောကောငျးပါတယျ။ သငျတို့နှဈယောကျတှပွေီ့ဆိုရငျ သူ့ရဲ့အပွုအမူအနအေထိုငျတှကေို လလေ့ာကွညျ့ပါ။
အဲဒီအခါ သူ့ခံစားခကျြတှကေ သငျ့အပျေါမှာ စဈမှနျလားဆိုတာ သိလာပါလိမျ့မယျ။ သငျ့ကောငျလေးအပျေါ လလေ့ာရမယျ့အခကျြတှကေို မသိရငျ ဒီဆောငျးပါးက ကူညီပေးမှာပါ။ အခကျြအတျောမြားမြားနဲ့ကိုကျရငျတော့ သငျ့အပျေါတကယျခဈြတယျဆိုတာ စိတျခလြို့ ရသှားပါပွီ။
1. သငျပွောသမြှကို အလေးထားနားထောငျပေးတယျ
သငျ့ခဈြသူက ဘယျအခြိနျစကားပွောပွော နားထောငျပေးတယျ။ အဲဒါက relationship တဈခုမှာ အဆကျအသှယျရှိဖို့က အရေးကွီးတယျဆိုတာ သူနားလညျလို့ပါ။ အပွောကောငျးတဲ့သူက ကောငျးကောငျးနားထောငျပေးတတျသူပါ။ သငျရငျဖှငျ့သမြှကို နားထောငျပေးပါလိမျ့မယျ။ အဲဒီလိုနားထောငျပေးတာက သငျ့ကိုစိတျလုံခွုံမှုပေးခငျြလို့ပါ။ တကယျခဈြတဲ့ကောငျလေးက သငျပွောသမြှကို စိတျရှညျရှညျနားထောငျပေးပါတယျ။
Relationship ခိုငျမွဲအောငျ အလုပျကွိုးစားရမယျဆိုတာ သူသိပါတယျ။ အဓိကကတော့ သငျ့ဘဝအတှကျကွိုးစားတာပါ။ အလုပျကွိုးစားတာက သငျ့ကိုခဈြလို့ဆိုတာ မမနေဲ့နျော။
သူက အရာရာကို အသေးစိတျအလေးအနကျ ထားတတျသူပါ။ သငျ့ကိုတနျဖိုးထားတယျဆိုတာ သကျသပွေခငျြလို့ပါ။
သငျ့ကိုတကယျခဈြရငျ ပြျောရှငျမှုကို ဦးစားပေးပါတယျ သငျပြျောရှငျနတောကို မွငျခငျြတဲ့သူပါ။ ဝမျးနညျးစိတျဓာတျကနြတောကိုလညျး လိုလားသူမဟုတျပါဘူး။ သူ့ပြျောရှငျမှုတှေ ဆုံးရှုံးရမယျဆိုရငျတောငျ သငျ့မကျြနှာကို အမွဲပွုံးနစေခေငျြသူပါ။
သငျနဲ့ပတျသကျရုံမကပါဘူး။ သငျ့မိသားစုနဲ့ပါ ရငျးနှီးခငျြတာပါ။ သငျနဲ့အနီးဆုံးမှာရှိတဲ့ သူတှကေိုလညျး သူတကယျခဈြကွောငျး ဖျောပွတတျပါသေးတယျ။ သငျတနျဖိုးထားရတဲ့ မိသားစုကို သူကလညျးတနျဖိုးထားပါတယျ။
သငျ့အပျေါယုံမှားသံသယမရှိပါဘူး။ သူ့အားနညျးခကျြတှကေိုပွောပွီး တစထကျတဈစ ရငျးနှီးလာအောငျလို့ပါ။ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ ယုံကွညျမှုကိုလညျး သငျ့မှာရှိလာအောငျ ဖနျတီးပါလိမျ့မယျ။
7.သငျ့ဘဝမှာ အဆငျပွလှေယျကူအောငျ ဘာမဆိုလုပျပေးတတျတယျ။
သငျ့ဘဝကို တတျနိုငျသမြှ အဆငျပွအေောငျ၊ လှယျကူအောငျ ကွိုးစားပါတယျ။အိမျမှုကိစ်စတှေ၊ တောကျတိုမယျရ အလုပျတှကေိုပါ တဈခါတလေ လုပျပေးတတျသူပါ။
Relationship မှာ ရိုးသားမှုက အရေးကွီးပါတယျ။ ရိုးသားမှုက သူ့ကိုဒုက်ခရောကျစမေယျ ဆိုရငျတောငျ သငျ့အပျေါရိုးသားနဦေးမှာပါ။ ရိုးသားစဈမှနျတဲ့ သူ့အခဈြတှနေဲ့ သငျ့ဘဝကို လုံခွုံမှုပေးတာပါ။
လေးလေးစားစားဆကျဆံတာ တနျဖိုးထားလို့ပါ။ သူ့ကိုဆိုးဆိုးရှားရှား ပွုမူနရေငျတောငျ ကိစ်စမရှိပါဘူး။သူကတော့ သငျ့ကို အမွဲဂရုစိုကျနမှောပါ။ ဘာ့ကွောငျ့လဲဆိုတော့ အပွနျအလှနျ လေးစားမှုတဈခုက relationship ကို ခိုငျမွဲစလေို့ပါပဲ။
ကောင်လေးတွေ တကယ်ချစ်မိပြီဆိုရင် ပြုမူတတ်တဲ့အချက် ၉ ချက်
သင့်အပေါ် တကယ်ချစ်တဲ့ချစ်သူနဲ့ ဆုံတွေ့ရတာ နေ့တိုင်းကံကောင်းနေတာပါနော်။ အတိတ်မှာ သင်ကတကယ်ချစ်ခဲ့ပေမယ့် သင့်ကိုတကယ်မချစ်တဲ့သူနဲ့လည်း ဆုံခဲ့ရမှာပါပဲ။ အဲဒီအချိန်မှာ ကြီးကြီးမားမားစိတ်ထိခိုက်တာတွေ၊ အသည်းကွဲတာတွေကို ခံစားရမှာပါ။ အသည်းကွဲပြီဆိုရင် ယုံကြည်မှုတွေလည်း ပျောက်ဆုံးသွားမယ်။
မျှော်လင့်ချက်တွေလည်း ဆုံးရှုံးသွားမယ်။ အမှန်တရားတွေကိုလည်းညလက်မခံနိုင် ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ နောက်ထပ် မချစ်မိတော့အောင် သင့်ကိုယ်သင် ကတိပေးနေတော့မှာပါ။ အချစ်စစ်ကိုမတွေ့မချင်း ဘယ်သူ့ကိုမှမချစ်မိအောင် နေမယ်လို့ သင်ပြောခဲ့မှာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် အလုပ်ထက် အပြောက ပိုလွယ်ပါတယ်နော်။
Relationship တစ်ခုမှာ ကောင်လေးတွေက စကားများတာ၊ လေပေါတာကို မကြိုက်ပါဘူး။ အဲဒီအခါ သင့်ချစ်သူက တကယ်ချစ်လား၊ မချစ်ဘူးလားဆိုတာကို လေ့လာဖို့ လိုလာပါပြီ။ ပထမဆုံးအချက်နေနဲ့ ကောင်လေးတွေက အပြောကောင်းပါတယ်။ သင်တို့နှစ်ယောက်တွေ့ပြီဆိုရင် သူ့ရဲ့အပြုအမူအနေအထိုင်တွေကို လေ့လာကြည့်ပါ။
အဲဒီအခါ သူ့ခံစားချက်တွေက သင့်အပေါ်မှာ စစ်မှန်လားဆိုတာ သိလာပါလိမ့်မယ်။ သင့်ကောင်လေးအပေါ် လေ့လာရမယ့်အချက်တွေကို မသိရင် ဒီဆောင်းပါးက ကူညီပေးမှာပါ။ အချက်အတော်များများနဲ့ကိုက်ရင်တော့ သင့်အပေါ်တကယ်ချစ်တယ်ဆိုတာ စိတ်ချလို့ ရသွားပါပြီ။
1. သင်ပြောသမျှကို အလေးထားနားထောင်ပေးတယ်
သင့်ချစ်သူက ဘယ်အချိန်စကားပြောပြော နားထောင်ပေးတယ်။ အဲဒါက relationship တစ်ခုမှာ အဆက်အသွယ်ရှိဖို့က အရေးကြီးတယ်ဆိုတာ သူနားလည်လို့ပါ။ အပြောကောင်းတဲ့သူက ကောင်းကောင်းနားထောင်ပေးတတ်သူပါ။ သင်ရင်ဖွင့်သမျှကို နားထောင်ပေးပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီလိုနားထောင်ပေးတာက သင့်ကိုစိတ်လုံခြုံမှုပေးချင်လို့ပါ။ တကယ်ချစ်တဲ့ကောင်လေးက သင်ပြောသမျှကို စိတ်ရှည်ရှည်နားထောင်ပေးပါတယ်။
Relationship ခိုင်မြဲအောင် အလုပ်ကြိုးစားရမယ်ဆိုတာ သူသိပါတယ်။ အဓိကကတော့ သင့်ဘဝအတွက်ကြိုးစားတာပါ။ အလုပ်ကြိုးစားတာက သင့်ကိုချစ်လို့ဆိုတာ မမေ့နဲ့နော်။
သူက အရာရာကို အသေးစိတ်အလေးအနက် ထားတတ်သူပါ။ သင့်ကိုတန်ဖိုးထားတယ်ဆိုတာ သက်သေပြချင်လို့ပါ။
သင့်ကိုတကယ်ချစ်ရင် ပျော်ရွှင်မှုကို ဦးစားပေးပါတယ် သင်ပျော်ရွှင်နေတာကို မြင်ချင်တဲ့သူပါ။ ဝမ်းနည်းစိတ်ဓာတ်ကျနေတာကိုလည်း လိုလားသူမဟုတ်ပါဘူး။ သူ့ပျော်ရွှင်မှုတွေ ဆုံးရှုံးရမယ်ဆိုရင်တောင် သင့်မျက်နှာကို အမြဲပြုံးနေစေချင်သူပါ။
သင်နဲ့ပတ်သက်ရုံမကပါဘူး။ သင့်မိသားစုနဲ့ပါ ရင်းနှီးချင်တာပါ။ သင်နဲ့အနီးဆုံးမှာရှိတဲ့ သူတွေကိုလည်း သူတကယ်ချစ်ကြောင်း ဖော်ပြတတ်ပါသေးတယ်။ သင်တန်ဖိုးထားရတဲ့ မိသားစုကို သူကလည်းတန်ဖိုးထားပါတယ်။
သင့်အပေါ်ယုံမှားသံသယမရှိပါဘူး။ သူ့အားနည်းချက်တွေကိုပြောပြီး တစထက်တစ်စ ရင်းနှီးလာအောင်လို့ပါ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှုကိုလည်း သင့်မှာရှိလာအောင် ဖန်တီးပါလိမ့်မယ်။
7.သင့်ဘဝမှာ အဆင်ပြေလွယ်ကူအောင် ဘာမဆိုလုပ်ပေးတတ်တယ်။
သင့်ဘဝကို တတ်နိုင်သမျှ အဆင်ပြေအောင်၊ လွယ်ကူအောင် ကြိုးစားပါတယ်။အိမ်မှုကိစ္စတွေ၊ တောက်တိုမယ်ရ အလုပ်တွေကိုပါ တစ်ခါတလေ လုပ်ပေးတတ်သူပါ။
Relationship မှာ ရိုးသားမှုက အရေးကြီးပါတယ်။ ရိုးသားမှုက သူ့ကိုဒုက္ခရောက်စေမယ် ဆိုရင်တောင် သင့်အပေါ်ရိုးသားနေဦးမှာပါ။ ရိုးသားစစ်မှန်တဲ့ သူ့အချစ်တွေနဲ့ သင့်ဘဝကို လုံခြုံမှုပေးတာပါ။
လေးလေးစားစားဆက်ဆံတာ တန်ဖိုးထားလို့ပါ။ သူ့ကိုဆိုးဆိုးရွားရွား ပြုမူနေရင်တောင် ကိစ္စမရှိပါဘူး။သူကတော့ သင့်ကို အမြဲဂရုစိုက်နေမှာပါ။ ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတော့ အပြန်အလှန် လေးစားမှုတစ်ခုက relationship ကို ခိုင်မြဲစေလို့ပါပဲ။